HAWIYOOW RUN BADANE MARAGGII HORAA MAQAN?!
W/Q: Mursal Max,ed Max,uud (Garaad)
HOR U DHAC
Kulan xasaasi ah oo ay Mudanayaasha Hawiye ku yeesheen Nairobi 24kii nov, isla makaasna ay ka dhexmuuqdeen Hogaamiye kooxeedyadda ugu magaca dheer ayaa noqday hadal haynta ugu badan, ee guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka dega Goboladda ay ka soo jeedaan Raggaasi.
Waxay kulankoodaasi ku sheegayn in ay gaareen heshiis ay u dhan yihiin. Qodobada heshiiskaas waxaa ka mid ahaa, in Dowladdu Caasimadda ka degto, iyaguna ay halkaas si diiran ugu soo dhaweeyaan. In Hubka ay haystaan ay Dowladdu kala wareegto, islamarkaasna loogu bedelo lacag adag. Iyo in Jagooyin Wasaaradood oo dheeraad ah looga soo sed-bursho beelaha kale, maadaama ay ugu dhibbadanyihiin Somaalida sida ay sheegteen.
Malagu kalsoonaan karaa heshiiska madaxdda Hawiye?
Taariikhada ayaa na baraysa in dhacdooyin aynaan sii saadaalin karin, ay iska fududaanayso male awaalkoodu, marka dib loo qooraan sado, waxyaabo taxane ah oo horay u dhacay soona laa-laabtay.
Sida aan dhamaanteen kawada dheregsanahay, ma,ahan markii ugu horeysay ee Madaxdda beelaha Hawiye ay heshiis ku gaaraan meelo kala geisan iyo siyaabo kala geisan. Marwalbana waxaa jirayey ismarxabayn, Cimaamaddo la'ishuwiyo iyo mashxarad lagu dhufto. Laakiinse dadka qaarkii oo weli u sii riyaaqsan heshiiskii lagaaray isuguna hambalyeynaya, ayaa waxaa soo gaara war ka gedisan kaas oo sheegay in Hogaamiye Hebel wax diidanyahay, dhowr kalena la tuhun sanyahay.Taas oo markale Rajo-beel iyo niyad jab ku abuurta dadkii.
Waxaan rabaa in aan si kooban u soo bandhigo qaar ka mid ah is hortagyaddii ay sameeyeen madaxdda Hawiye: Tusaale ahaan wax yar kadib markii la dhisay Dowladdi Cali mahdi, waxaa hor istaagay Ragg isla hiraab uun ah, oo aan ka xusi karo Allaha u naxariistee Janankii geeriyooday, taas oo natiijadii ka dhalatay ay ahayd, Dagaalkii lagu hoobtay ee lamagac baxay 4-billoodka. Waxaa xigay Salbalaar waxaa iyana hor istaagy kuwii ugu dhowaa, oo aan ka xusi karo Cusmaan Caato. Waxaa sidoo kale shaqayn waayey isku daygii La-gudoomiya Gobolka Banaadir. Waxaa xirmay khilaaf aawadii Dekeddii iyo Airboorka Xamar. Wixii markaas ka danbeeyeyna markasta oo la doonayo in la soo bandhigo dhoola-tus Siyaasadeed, waxaa lagu soo hadal qabsan jiray Dekedda iyo Airboorka furitaankooda ayaa lga bilaabayaa, taas oo aanay waxba marnaba ka qabsoomin. Iyadoo shacabka Muqdishana ay arintasi ku noqotay rajo, rajo ku sug. Bal ufiirso majiray shir Beesha Hawiye u qabsoomay, oon lagu sheegin in lafurayo Dekadda iyo Garoonka?
Yaanan ka ilduufin in aan xuso maamulkii T.N.G ee lagu soo dhisay Tuuladda Carte, kaas oon anigu dhihi karo waa shirkii ugu mudnaa uguna macquulsanaa intii loo qabtay Soomaali. DKG ahayd, maka laga soo tago beesha caalamka oon lagarab istaatin taageero Dhaqaale iyo mid Diblomaasiyadeed hadana Gudaha ayeey ka dhaqaaqi waysay, waxaana lugaha isaga maray isla beesha, oo la dhihi karo wixii hadda ka horeeyey waxay ahayd Beel aan waxba isku ogolayn, soomaalina aan waxba u ogolayn.
Waxaa mudan in la xuso in intabadan isbedeladii imaanayey wixii ka danbeeyey mudadii Qaran-jabka ay hormuud ka ahaayeen Madax Hawiye ah, Hawiye kalena ay diidanaayeen. Sikastaba xaalku ha ahaadee laguma hanwayna in ay fuliyaan go,aankooda. Heshiiska maanta waxbadan kama bdelna kuwii horay loo arki jiray, marka laga reebo in laysku dhaarsaday fulinta heshiiska, dhaartuna sidoo kale kahor istaagi mayso wax aanay ka hor joogsanayn, tii uu ugu dhaartay Barlamanka in uu ugu adeego Qaranka Somaaliyeed sid daacad ah. Dhanka kale intii ay doodu socotay waxaa laga dheehan karay in aan la isku uur fayoobayn, waayo waxaa halkaas ka soconayey Fara isku taag taag iyo hadalo kul-kulul oo lays waydaarsanayey. Waloow markii danbe ay sheegayn in ay meel isku raaceen. Hidaayo kalaase laga yaabaa in Eebe ku soo ridaye yaanan ka hor dhicine aan u daayo Waqtiga iyo Waayaha.
Codsiga hawiye suurtagal mayahay, waa maxayse Danta qarsooni?
Dastuurka waxaa ku qoran in beeluhu ay wax u qaybsadaan 4 siman iyo bar(4.5) taas oo haddii wax laga bedelo uu lumayo hanaankii awood qaybsiga beelaha(Clan power-sharing). Sidaas darteed ma filayo in Madaxweyne C/laahi iyo Wasiirkiisa 1aad ay ku dhaqaajiyaan talaabadaas, barlamanka la,aantiis. Haddiise Barlamanku arintaas isla meel dhigo,oo uu go,aan ka qaato amase beelaha kale ee Somaaliyeed sidaas laga baryo markaas Dastuurka ka hor iman mayso. Haddii sidaasi ay timaadana Beesha Hawiyuhu waxay si wayn uga dhex muuqan doontaa Dowladda, Wasiirka 1aadna wuxuu noqon doonaa mid awood bdan. Arintaan aan soo xusay waxay dhacaysaa marka ay ku xaqiijiyaan in Dowladdu ay ka degto Caasimadda, xafiisyadda ugu bdana ay ka qabtaan, loona yeelo dalabkoodii ahaa in Wasiiro dheeraad ah la siiyo. Taas ayaa laga yaabaa in ay tahay waxa hadda ay u gurbaan tumanayaan, oo Dowladdana ay ku garab galayaan.
Arinka kale ee ay dhici karto in hoosta laysugu sheegay waxa weeye, in ay ku doonayaa Hukooda in ay Dowladdu ugu bedesho lacag ku dhow 100 milyan$ waxa xigayana ay tahay in aan Qabiil kale lakeenayne, Maleeshiyadda hadda Gacanta ku haya Hubka ay sii hayaan, loona tababaro meelaha ay Ciidanka ka geli karaan sida Boliska, Milateriga I.W.M. Iyadoo mar marsiinyana laga dhiganayo in Ciimadamdii hore ee Qaranku badankood Howl-gabyihiin
Haddaba iswaydiinta ugu badan, waxay tahay Ragga ugu mayalka adag sidee laga yeelayaa, ama sidey uga dhabaynayaan go,aankoodaas? Tusaale ahaan Cismaan Caato, Maalmo yar ka hor Doorashdii C/laahi mar uu la hadlayey Saxaafadda wuxuu yiri"C/laahi Yuusuf, ma'aynaan kulmin, mana kulmi doono, salaantana iskamba qaadno" waa Colaad fog!!Haddaba Isxabadsaarkii Barlamanka hortiisa ay ku sameeyeeyn isaga iyo C/laahi Yuusuf, iyo in C/laahi yiri aniga iyo Caato saaxiibaan nahay reer Mudugna waan islanahay, iyo in ay jiri karto Jago hoos loogu sheegay isaga ama qof uu watto, maku filnaan doontaa in ay halkaas ku idlaato Collaadii u dhexeysay, Caatana Joojiyo wax diidnimaddii uu ku caan baxay? Sidoo kale Ragga Wadnaha farta lagu hayo in ay ka horyimadaan waxaa ka mid ah Muuse Suudi, oo mid ka mid ah Waraysiyaddii ugu shacbiyadda badanaa ku sheegay, in C/laahi Kab kawayn xiranayo, taas oo hadalkiisa laga dhedhen san karay marka laga soo tago qabiil ahaan oo uu wax isku xijinayey, haddana in uu aad u sii fogaynayey C/laahi Yuusuf. Muuse sidoo kale ma ka dhabayn doonaa go,aankiisa ah in uu la shaqeeyo Dowladda oo uu ku qanco Wasiirka 1aad oo loo dhiibay Bahdda uu ka soo jeedo ee Mudulood ee uu in badan u soo halgamayey? Dhamaan su,aalahaas oo ah kuwo la is waydiinayo waxaan u danynaa Waqtiga iyadoo aysanba dheerayn markii lakala ogaan lahaa.
Hawiyoow qiratay in aad is dhibteen, dadkii kalena uu gaaray dhibkiinii. Haddii aad garatayn in aad maanta Soomaali wax lawadaagtaan, markaasi waxaad u muuqanaysaan in Dowrka dhow 5-sanno kadib wax laydinku aamini karo, oo aad haysataan sumcad aad la soo shirtegi kartaan.
Sidaas darteed heshiiskiinu yaanu noqon kii horay loo arki jiray oo kale, ama mid ay dano dahsoon ku hoos jiraan, sida Danaha aan soo xusay oo kale. ugu danbayn waxaay Soomaali idin leedahay Kaadi badane waa loo gogol badshaaye, bal hadana.
CALOOSHII WAX BOOBTA DIBBAY CIRIB XUMAATAA
W/Q: Mursal Max'ed Max'uud (Garaad) Email: stethy1@yahoo.com
Faafin: SomaliTalk.com | Nov 27, 2004